Nnwom 72 NA-TWI - Mpae a wɔbɔ ma ɔhene - Kyerɛ ɔhene - Bible Gateway
Nnwom 71Nnwom 73
Nnwom 72 Nkwa Asem (NA-TWI)
72 Kyerɛ ɔhene no na ommu w’atɛntrenee, O Onyankopɔn. Kyɛ no atemmu nyansa no bi 2 sɛnea ɔde nokware bedi wo nkurɔfo so na wahwɛ wɔn a wɔremia wɔn no trenee mu. 3 Asase no nkɔ so frɔmfrɔm. Ma trenee mmra asase no so. 4 Ma ɔhene mmu ahiafo atɛn pa. Ma ɔmmoa ahiafo na onni wɔn a womia wɔn afɛfo so nkonim. 5 Wo nkurɔfo nsom wo mmere dodow a owia bɔ yi, na ɔsram nso hyerɛn kɔsi daa daa yi.